सुजाताको कुरा मलाई नसोध्नुहोस्
गोपालमान श्रेष्ठ, उपसभापति नेपाली कांग्रेस
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/753ec9450_b.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुटाकुट नै भएछ नि ?
- लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्ता कुरा सामान्य हुन् । विषयगत छलफल भइरहेको छ । अतिरिाजत तरिकाले साचारमाध्यममा आएजत्ति घटना हाम्रो पार्टीमा भएको छैन ।
- महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको हो । साथीहरुले छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
कहिले टुंगो लाग्छ ?
- छलफल चलिरहेको छ सम्भवतः छिट्टै टुंगो लाग्छ भन्ने आशा गरौं ।
आपनै सरकार ढाल्न संयन्त्र बनाउनुभयो होइन ?
- उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकार ढाल्न निर्माण भएको होइन । यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने हुँदैहुँदैन र त्यो म्यान्डेट यसलाई छैन ।
तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त संयन्त्रमा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लानुभयो नि ?
- यो हल्लै हल्लाको कुरा हो । प्रचण्डजीले मैले भनेकै छैन भनेर भन्नुभएको छ । त्यो कुरा आफैं बारम्बार दोहोर् याइरहनु भएको छ । तर पनि उहाँको कुरामा विश्वास गर्ने आधार त छैन किनभने अघिल्लो दिन एउटा कुरा प्रेसमा आएको हुन्छ भोलिपल्ट फेरि बोलेकै छैन भन्नुहुन्छ । त्यसकारण उहाँले भन्नु नै भएन प्रस्ताव नै गर्नुभएन म भन्दिनँ तर पनि आफैंले खण्डन गरेपछि होइन भनेर विश्वास गरौं ।
आशंका गरेजस्तो सरकार ढाल्न सक्ने सामथ्र्य संयन्त्रले राख्दैन होइन ?
- शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण तथा माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न सहयोग पुर् याउने यसको उद्देश्य भएकाले सामथ्र्य र कमजोरीको कुरा कहाँबाट आउँछ
यो काम सरकारले गर्न नसकेपछि संयन्त्र निर्माण भएको हो ?
- हैन यो त पार्टी-पार्टीबीच सहमति जुटाउन निर्माण गरिएको हो । म त अझै के भन्छु भने यो संयन्त्र अपूर्ण छ । यसले अझै पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
- नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादीमात्र होइन अरु पनि त्यसमा अटाउन सक्नुपर्छ । खासगरी मधेसवादी दल र प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसमा राखिनुपर्छ । जसले शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र लडाकु समायोजन व्यवस्थापन पुनस्र्थापन के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सजिलो होस् । सबैको सहमतिमा गरिएको कार्य दिगो हुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभयो नि ?
- यो सुजाताजीको व्यक्तिगत कुरा हो । पार्टीले अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको कुनै सोच बनाएको छैन । पार्टीले त अहिले माधव नेपालको सरकारलाई पूर्णरुपमा समर्थन गरेको छ । यो सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा कांग्रेसकै ठूलो हात थियो र अहिले पनि संसदीय समितिले यही सरकारको समर्थन गरेको छ । यो अवधारणामा कांग्रेस विचलित छैन ।
पार्टीबारे सरकारमा नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री नै यो सरकारको विपक्षमा देखिनुभयो नि ?
- उपप्रधानमन्त्री मन्त्री जे भए पनि उनको कुरो मैले भन्ने होइन नि ! सुजाताजीको कुरा सुजाताजीले नै भन्नुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री भएको मानिसले आपुनो सरकार आफैंले ढाल्छु भन्नु नैतिक रुपले मिल्दैन नि ! सरकार फेर्नुपर्छ सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नु हुँदैनथ्यो बोल्नुभयो ।
पार्टीले समर्थन गरेको सरकारविरुद्ध बोल्दा पनि तपाईंहरु किन प्रतिकि्रयाविहीन ?
- व्यक्तिगत विचार तथा व्यक्तिगत इवीले आपुनो अवधारणा राख्नुभएको होला । उहाँले राखेको त्यो व्यक्तिगत विचारमा मैले केही टिप्पणी गर्न जरुरी छैन ।
गत संसदीय दलको बैठकमा पनि युवा नेताहरुले यो सरकार परिवर्तन गर्नैपर्ने प्रसंग उठाउनु भएको छ नि ?
- सुझावहरु आउन सक्छन् । हाम्रो पार्टीका प्रवक्ताले नै भन्नुभएको छ कि संस्थागत निर्णय गरेर एमाले र माओवादीले कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्न अनुरोध गरे भनेमात्र यसबारे सोच्न सकिन्छ । व्यक्तिले के बोल्यो के प्रस्ताव राख्यो त्यसमा कांग्रेस जाँदैन । यस्ता कुराहरु आउँछन् सेलाउँछन् । सल्लाह सुझाव दिन्छन् तर सरकार परिवर्तन र नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सवालमा पार्टीको कुनै धारणा बनेको छैन । म पार्टीको जिम्मेवार नेता भएकाले पार्टीको अवधारणाअनुसार बोल्ने हो ।
कांग्रेस सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन त ?
- हो कांग्रेसले सरकार परिवर्तन गर्दैन । आफैंले निर्माण गरेको सरकार आफैं ढाल्दैन । यो हाम्रो चासोको विषय पनि त्यो होइन ।
सेना समायोजनको विषय अत्यन्त विवादित छ यत्तिका समयसम्म किन गर्न नसक्नु भएको ?
- गर्न नसकेको होइन । सेना समायोजन विशेष समिति त्यसमा लागिपरेको छ । तर त्यसका लागि एनेकपा माओवादीले पूर्णरुपमा सहयोग गरेको छैन । माओवादीले सहयोग नगरेसम्म लडाकुको समायोजन पुनस्र्थापन तथा व्यवस्थापन केही पनि हुन सक्दैन । यो पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार हुनुपर्छ । सम्झौतामा जे छ त्यही हुनुपर्छ ।
शान्ति सम्झौतामा ६ महिना उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म भएन किन होला ?
- माओवादीको सरकार नौ महिनासम्म चल्यो त्यसले पनि गर्न सकेन । माधवजीको सरकारले यसमा धेरै कार्य गरेको छ । अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई बिदा गर्ने काम यही हप्ता सम्पन्न गरेको छ । समायोजन नगरीकन नयाँ संविधान आउन सक्दैन । यदि संविधान बनाउनु नै छ भने पहिला क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समायोजन व्यवस्थापन र पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ । यसको टुंगो लागेपछि मात्र संविधान आउने हो ।
माओवादीले त नेपाली सेनामै समायोजन गर्नुपर्छ भनेका छन् कति उचित हो ?
- यसमा धेरै बहस र तर्क गर्नु जरुरी छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको छ जे-जे भनिएको छ त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । त्यसले जतापट्टि कोड गरेको छ त्यसैमा हामी दृढ छौं । अब नेपाली सेनामै हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको मागमा म टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न । नेपाली सेना हुन मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । मापदण्ड पुगेका प्रत्येक नेपालीले त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छन् । त्यो अधिकार अरुलाई दिने माओवादी लडाकुलाई नदिने भन्ने पनि म मान्दिनँ । मापदण्ड पुगेपछि हुन्छ मापदण्ड नपुगी हुँदैन । यत्तिकै समूह समूह समायोजन हुँदैन । त्यसो त नेपाली सेनामा मात्र होइन जनपद प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । लडाकु भयो भन्दैमा जो पायो त्यही र समूहगत प्रवेश हुँदैन ।
राज्य पुनसर्ंरचनाको निर्णयमा तपाईले त आपत्ति जनाउनुभयो किन र ?
- मैले आपत्ति जनाएको त मेरो पार्टीलाई हो । नेपाली कांग्रेसलाई हो ।
- मेरो पार्टीले मेरो अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गर् यो र राज्य पुनसर्ंरचना गर्दा कस्तो हुनुपर्छ प्रतिवेदन पेस गर भन्यो । त्यसका लागि हामीले १०?407;१ महिना ुएक्सरसाइजु पनि गर् यौं र सोको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पनि बुझायौं । त्यसमा व्यापक छलफल पनि भयो । केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरुले आ-आपुना दृष्टिकोण राखे । त्यसपछि सो छलफलको आधारमा त्यसलाई पुगे नपुगेको कुरालाई काटछाँट गरेर ल्याउन पुनः अधिकार प्रदान गर् यो । त्यसैको आधारमा हामीले महासमितिमा पेस गर् यौं । तर संविधानसभाको राज्यको पुनसर्ंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिमा हाम्रो समितिले तयार पारेको नक्सा पेस गर्न पार्टीका केही नेताले षड्यन्त्रपूर्वक कार्य गरेर दिएनन् । जसकारण राज्य पुनसर्ंरचनाको सवालमा नेपाली कांग्रेसको भिजन नै रहनेछ भनेर पार्टीकै बद्नाम हुन पुग्यो । हाम्रो कांग्रेसको आधिकारिक समितिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य त गरे नै जसको परिणाम पार्टीकै बद्नाम भयो । त्यसमा मलाई दुःख छ ।
राज्यको नामाकरण गर्दा जातीय आधारमा हुनुपर्छ कि अन्य आधारमा ?
- केही पार्टीले जातीय आधारमा नामाकरण गरेका छन् । यसो गर्दा बाँकी जातिले दोस्रो नागरिक भएको महसुस गर्न सक्छन् । त्यो राम्रो होइन किनभने कोही दोस्रो दर्जाको नागरिक नबनोस् । जातीय नमाकरण गर्दा द्वन्द्व निम्तिन्छ भन्ने आशंका हो । जातीयभन्दा अरु नाम राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको ।
Source: Nepal Britain.